नयाँ वर्षको लागि केटाहरु को उपहार
मातृत्व बच्चा र उनको हेरविचार
नयाँ वर्षको छुट्टियों को लागि तैयारी मा महत्वपूर्ण क्षणहरु मध्ये एक बच्चाहरु, भतिजाहरु र देवदारहरुको लागि क्रिसमसको पेड़ को चयन को मुद्दा हो। केटालाई के गर्ने निर्णय गर्ने बेला, कसैले आफ्नो उमेर, क्यारेक्टर र प्राथमिकताहरूमा भरोसा राख्नुपर्छ। निस्सन्देह, सबै छोराछोरीहरू व्यक्तिगत छन्, तर त्यहाँ केही विचारहरू छन् जुन मद्दत गर्न सक्छन्।
केटाहरुका लागि नयाँ वर्षको उपहार 2-3 वर्ष पुरानो
यस्ता केटाकेटीहरू खिलौनेहरूसँग खुसी हुन्छन्, किनभने तपाई यस्तो विकल्पहरूमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ:
वर्णमाला बोल्ने एक उपयोगी र रोचक कुरा हो, जो बजाउने मौका बाहेक अरूलाई अक्षर मास्टर गर्न मद्दत गर्नेछ;
प्लास्टिक वा वस्त्र निर्माण गर्ने;
एक तम्बू, जसमा कोठामा स्थापना गर्न सकिन्छ, सानो फाइजिङ्ग घुमाउनेछ;
ठूलो तत्वहरु संग पहेलो;
सामान्यतया साना केटाहरू जस्तै कारहरू छन्, किनभने यो विजयी विकल्प हुनेछ।
नयाँ वर्षको लागि केटाहरुका लागि उपहार 4-6 वर्ष
यस उमेर सम्म, बच्चाहरु को पहिले नै छुट्टी को सार को रूप मा बुझिन्छ र यसको लागि आफ्नो आमाबाबु संग तैयार गर्न को लागी शुरू गर्छन। बच्चाहरूले पहिले नै आफ्नो प्राथमिकताहरू र इच्छा व्यक्त गर्छन्। पूर्वस्कूलकर्ताहरूको लागि, तपाइँ निम्न विचारहरू तयार गर्न सक्नुहुन्छ:
यदि एक केटासँग साइकल छैन भने, उनी निश्चित रूपमा यस्तो उपहारको साथ खुसी हुनेछन्;
त्यहाँ धेरै बोर्ड गेमहरू छन् जुन यस युगको बच्चा जस्तै हुन सक्छ;
पार्किंग, कार ट्रयाक
रेडियो नियन्त्रणमा एक कार, हवाई जहाज वा हेलीकाप्टरले कुनै पनि बच्चालाई प्रसन्न पार्नेछ;
तालिका फुटबल वा हकी;
मार्कर, पेंसिल, क्रेनेन्स, प्लास्टिकिन, पेंट र अरू रचनात्मक सामानहरू कृपया कृपया कृपया बच्चालाई र आफ्नो क्षमताहरू विकास गर्न मद्दत गर्नेछ।
कुन केटालाई 7-10 वर्ष दिनुहुन्छ?
सानो विद्यालयको उमेरमा बच्चाहरू केवल खिलौनेको साथमा खुसी हुनेछन्। यदि तपाइँ एक केटाको लागि उपहार छनौट गर्न चाहानुहुन्छ जुन एक ठाउँमा बस्न सक्दिन, तपाइँले रोलर स्केट्समा राम्रो ध्यान दिनुपर्छ। स्कूलचालकहरूले जेब पैसा देखाउन थाले, किनकी उसले आफ्नो मनपर्ने पात्रको तस्वीरको साथ पर्स प्राप्त गर्न पाउनेछ। यस उमेरमा, अझै पनि प्रासंगिकता तालिका खेलहरू, सबै प्रकारका कारहरू, किताबहरू गुमाउँदैनन्।
मातृभाषाको लागि प्रमाणपत्र
घरमै एक्लै स्कूलमा कसरी खेलिने?
मातृभाषा कसरी एक दोस्रो बच्चाको लागि पाउनु हुन्छ?
बालबालिकामा एक हिड
2 वर्षको बच्चाको साथ अनुप्रयोग
पनरोक गद्दे प्याड
बच्चा जनावरहरूलाई सतावट गर्दछ - कसरी गर्ने?
2 बर्षमा बाल विकास
बच्चाहरु को रबड जूता हीटर संग
सोच को विकास को लागि खेलहरु
साना बच्चाहरु को उपस्थिति मा तलाक
प्रारम्भिक गर्भावस्थाको समयमा हेड गर्छ
एन्टोनियन डुर्वक संग्रहालय
57 वर्षीया हग ग्रान्ट पाँचौं पटकको लागि बुबा बन्नुभयो
Epstein-Barr भाइरस - कसरी पहिचान र सही रूपमा संक्रमणको उपचार गर्ने?
Hyssop - उपयोगी गुण र विनाशकारी
गिगी हदीडले क्यालेन्डर प्रेमको सेटमा अत्यधिक चिन्ताको साथ प्रशंसकहरूलाई शंका गरे
सानो भान्साको लागि भान्सा सट्टेबाज
पत्तिहरू किन पहेंलो बदल्छ?
बच्चाहरूको ओर्थोडक्स अपब्रिङ
तालिका कसरी बनाउने?
बेडरूमको लागि सुन्दर पर्दे
ब्लेडडर्रोट "रेड बैरन"
कसरी गर्ने, यदि तपाईं अहंकारक हुनुहुन्छ?
मान्यता भन्दा बाहिर मेग रयान परिवर्तन भएको छ
स्नानको लागि कास्ट आयरन ओवन
रूसको उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरू
कार्लोना कुर्कोवा - आमा दुई पटक!
बच्चालाई कसरी 10 मा गणना गर्न सिकाउनुहुन्छ?
शहदको चिकित्सीय गुण
इरेन शैिकले एलएल पत्रिकाको लागि पुरुषहरूको विजयबारे एक रोचक साक्षात्कार दिए